Isithwathwa sisinika iimvakalelo ezintle, zilungelelanise ukuba zenzeke kwaye zizimisele ukuhlaziywa i-wardrobe. Yintoni evelelekayo ngeli xesha? Abaqulunqi, ekugqibeleni, banikele iqoqo zabo. Akukho ntliziyo. Namhlanje siyayazi neBizzarro. Spring-ehlobo ngo-2015 kuyo yonke ubuqaqawuli bayo.
Kulo xesha, uBizzarro unobungqingili obukhulu kunye nobulula. Ukuqokelela kunentsikelelo eninzi, izicatshulwa ezibalaseleyo - i-laconic kwaye, ngelo xesha, ubuhle bobuhle obuhle. Yonke into ayinakwenzeka.
Ubuntombi bukho ngaphambili. Akukho fowuni kwaye akukho bunzima. Zonke iinkcukacha zifanelekileyo kwaye zingenasiphako. Iimfashini zefestile kunye neklasikhi ezingapheliyo ngokumangalisayo zidibanisa kwaye zinike ukuqokelela umonakalo oyingqayizivele. Abaqulunqi baphefumlelwe ngamaphupha eentyatyambo kunye nokukhululeka okukhulu. Yonke into inobumnene kwaye iyingqungquthela yothando.
Yonke into idlalayo, iyamkela ngokuthobeka kwaye iphumelelane ngempumelelo. Kwaye i-orange kunye nobomvu ayifani ukudibanisa ukungathandabuzeki kwabo, kodwa ngokulinganayo kulungelelanise ngokuvisisana nokuthotyelwa kwengqoqo.
Eyona nto iyacaca kwaye iluhlaza, yonke imibala yegrey ne-blue, isardard kunye ne-pink pin. Yonke imibala iyahluke ngokukodwa kwaye i-organic organic. Iindidi ezahlukeneyo ze-shades zikuvumela ukuba wenze umfanekiso obangelisayo kunoma yimuphi umxholo. AbaMhlophe nabamnyama bakhona, kodwa u-unobtrusively uzalisekisa uthando kunye nokuphefumlelwa kwesi sihlandlo sehlobo sasehlobo.
Iingubo zinika imfesane kunye nobulili, iipketi zigxininisa ngokuphumelelayo izibopho ezilingayo, kunye neentsimbi aziphazamisi ukuzonwabisa ngobuhle besifazana. Yonke inceba yentwasahlobo, umxhelo weentyantyambo kunye novuyo lweentsuku zelanga zidlula kwiqoqo kwaye zimnika umonakalo omangalisayo. Isisombululo esinomdla sisinomdla.
Ukuqokelela kwafunyanwa ngokuthatha inxaxheba kumyili we-Italy uMarco Nicoli. Apha amnyama, obomvu kunye ne-bluhlaza awona mnyama. Umqambi wanciphisa ububele bobuhle behlobo lwehlobo lwehlobo. Ubumnandi obomvu obunobulumko obumnyama, njengokuba njalo. Kodwa izigqibo ezinesibindi azikho nto zincinci.
Izambatho kwi-Bizzarro iqokelela indawo ekhethekileyo. Iipateni zeentyatyambo zentyatyambo, umhlobiso weentyatyambo kunye nejometri. Ayikho isondo esicacileyo, kodwa kukho isibheno esincinci. Akukho nto inzima, kodwa kukho izisombululo ezinomdla. Akukho kubhalwa kunye nokunyamezela, kodwa kukho ubuchule kunye nobuhle.
Iintlobo zeenwele ezintle kakhulu ezinyakazayo-ehlobo 2016
Imbali yolwimi Prada
I-Loft kwimbala ye-pastel: i-aesthetics yezoshishino kwifom yeklasi
Strawberry smoothie nge yoghurt
Yintoni enxiba ngayo uNyaka omtsha 2016?
Ulawulo lokuzimela: ishedyuli yokusebenza ngexesha lomsebenzi